Iindlela ezi-5 zokuThengisa uKhenketho kwiiNtswelo zakho zoKwenziwa kwabaNtu | Martech Zone
Iindlela ezi-5 zokuThengisa uKhenketho kwiNtswelo yakho yoKwamkela
NgoMgqibelo, Julayi 25, 2015 NgoMgqibelo, Julayi 25, 2015 Douglas Karr
Umntu odumileyo kwiiNdawo zokuHamba isungule isiza ngo-Matshi ka-2015 nesikhokelele ekunyukeni kwe-12% kubhukisho olusuka kwizixhobo eziphathwayo / zeethebhulethi kwiiveki ezimbini zokuqala, ukonyuka nge-3% kwingeniso ekwi-intanethi kunye nokunyuka kwe-140% kwingeniso ye-Intanethi. Bakufezekisile oku ngomxholo ophuculweyo wohambo lwendawo, imifanekiso enamandla kunye nenkqubo yokubhukisha eyenziwe lula - ngokuthepha kwindlela yedijithali nabahambi.
Ukuphucula uhambo olushukumayo kwiwebhusayithi yayo, ukwandisa ukuguqulwa kunye nokuhambisa amava e-brand ahambelanayo ngokuhambelana nexabiso lenkampani yanamhlanje, iiNdawo zooDumo eziHloniphekileyo zisebenza kunye nomnikezeli wetekhnoloji yamava kubathengi SDL kunye nokucebisa kwidijithali Iibhloko zokwakha.
Iimpawu zokuhamba zehlabathi kufuneka ziyanelise iimfuno zabakhweli kunye neendwendwe kokubini ngobuqu nakwi-intanethi, ngexesha lokwenyani nakwiilwimi ezininzi. Oku kuthetha ukuqinisekisa ukungabinamthungo, amava angaguqukiyo kumajelo kunye nonxibelelwano. Ukufezekisa oku, abathengisi kufuneka bahlengahlengise izicwangciso zabo njengoko indlela yokuziphatha kwabathengi kunye nokukhetha kuguquka, kugcinwa ezi ndlela zintlanu zokuhamba zedijithali engqondweni. IPaige O'Neill, i-CMO, i-SDL
Umzi mveliso wokuhamba jikelele ngoku ujongene nomceli mngeni owahlukileyo wokwanelisa iimfuno zabahambi ngobuqu nakwi-intanethi, ngexesha lokwenyani nakwiilwimi ezininzi. Ukufikelela kunye nokudlula kwiimfuno zabahambi, iimveliso kufuneka ziphuhlise indlela ebukhali ngakumbi ngokuqonda ezi ndlela zihlanu zokuhamba zakha ikamva lamava edijithali.
Iindlela ezi-5 zohambo ezakha ikamva lamava edijithali
Ukwandiswa kweNtlalo -Abahambi abathe cwaka abasathethi kwaye bavakalisa inkxalabo kwi-Intanethi ngaphandle kokuthetha. Basebenzisa izixhobo zedijithali kwaye abasadingi kubanjwa ngesandla ngabantu
Ukwenziwa komntu ngokusekwe kukhetho - Abahambi abagqithisileyo boyisiwe kukhetho lwe-Intanethi. Abathengisi kufuneka bahambise ulwazi olujolisiweyo, olwenzelwe wena kubahambi abasebenzisa idatha kunye nokulungisa i-CX engcono
Ukusetyenziswa kwamava edijithali -Imbonakalo lulwimi olutsha lwexesha ledijithali. Abathengi baxabisa uluvo lwabanye ngaphezulu kwako konke ukuthengisa
Ukuphazamiseka kwifowuni -Uber kunye ne-AirBnB yimizekelo yeziphazamiso eziguqukele kwizixhobo zokusebenzisana.
Ukuzisebenzela ngokwamanani -Namhlanje i-39% yeminyaka ye-Millennials bahamba ngohambo lwabo nge-metasearch kunokuba basebenzise ii-arhente zemveli zokuhamba kwi-Intanethi (ii-OTA) okanye indawo yokukhangela indawo ngokuhambelana nabaphandi bedijithali. Iimpawu zokuhamba kufuneka zicinge ngaphaya koluhlu lokuhamba kunye nomba wokunxibelelana kwimeko yenkcubeko ukuhambisa kulindelo lwabahambi lwehlabathi.
NgoJulayi 28, 2015 ngo-4:55 PM